မူပိုင်ခွင့် | စည်းကမ်းချက်များ | HTC Myanmar
HTC သည် တစ်ပါးသူ၏ ဉာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို အလွန်အလေးထားသည်နှင့်အညီ အသုံးပြုသူများကိုလည်း ထိုသို့ကျင့်သုံးရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးချင်းစီသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်သို့ မိမိတို့လွှင့်တင်လိုက်သော အချက်အလက်များသည် တတိယအဖွဲ့အစည်း၏ မူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်နေခြင်းမရှိစေရန် အထူးတာဝန်ယူရပါမည်။
အကယ်၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရောက်နေသောအချက်အလက်များသည် တတိယအဖွဲ့အစည်း၏ မူပိုင်ခွင့်အား ချိုးဖောက်နေသည်ကို တွေ့ရှိပါက HTC အနေဖြင့် Digital Millennium မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ( “DMCA”) နှင့် တည်ဆဲဥပဒေအရ ထိုအချက်အလက်များကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှ ချက်ချင်းဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အကျိုးဆက်အားဖြင့် မူပိုင်ခွင့်အား အဖန်ဖန်ချိုးဖောက်သူ၏အကောင့်ကို HTC မှ ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် အကောင့်ပိုင်ဆိုင်သူ သို့မဟုတ် မှာယူသုံးစွဲသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မူပိုင်ခွင့်အား အဖန်ဖန်ချိုးဖောက်နေသည်ကို သိရှိရပါက HTC မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်သို့ ဆက်သွယ်ကာ ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များအား အသိပေးအကြောင်းကြားရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံထားရသော အချက်အလက်များကို အသိပေးခြင်း
အကယ်၍ သင်လုပ်ဆောင်ထားပြီးသောအချက်သည် မူပိုင်ခွင့်ကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ချိုးဖောက်သကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ဟုထင်မြင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ အောက်တွင်စာဖြင့်ဖော်ပြကာ HTC မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်သို့ တင်ပြပေးပါရန်။ သတိပြုရန်မှာ HTC ၏ အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များသည် သင့်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိသော မူပိုင်ခွင့်ထားရှိပြီးသား သင့်အချက်အလက်များသည် ကူးယူခံထားရခြင်းရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ အခြားသောစုံစမ်းမေးမြန်းမှု (ဥပမာ-နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီတောင်းခံမှု) များကို ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှနေ၍ ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ခြင်းဖြင့် အချက်အလက်များအား ပယ်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုမည်ဆိုပါက သင်သည်မှန်ကန်သော ဥပဒေလုပ်နည်းပေါ်သို့ စတင်ခြေချနေပြီပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ HTC ရှိ သင့်စာရင်းအတွက်၊ အခြားသော ဥပဒေအကျိုးဆက်များတွက် ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ 17 U.S.C. အောက်တွင် မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်သည့် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိလျက်နှင့် မှားယွင်းစွာတင်ပြပါက Lenz v. Universal Music Corp. , 572 F. Supp. ၏ ဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့ အပိုဒ် ၅၁၂(စ) နှင့် အခြားသော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအရ သင့်တွင် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှကောက်ခံသော သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူများထံမှ ကောက်ခံသော ရှေ့နေငှားရမ်းခများ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ 2d 1150 (N.D. Cal. 2008).
သေချာစွာစစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ သင်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်လိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအချက်အလက်များကို HTC ၏ မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်သို့ ပို့ပေးပါရန်-
မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စား လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ လက်မှတ်အစစ် သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ်လက်မှတ်
ချိုးဖောက်ခံထားရသည်ဟု သင်တင်ပြသောအချက်အလက်တင်ထားရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိနေရာ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်-သို့မှသာ HTC မှ ထိုအချက်အလက်ကို နေရာချပေးနိုင်ပေမည်။
HTC မှ အသိပေးချက်နှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ပါက သင်၏ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်တို့မှ သင့်ထံဆက်သွယ်နိုင်ပေမည်။
တင်ပြထားသော အချက်အလက်သည် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဥပဒေ၏ တရားဝင်လွှဲအပ်ထားခြင်းမရှိသည်ကို ယုံကြည်ကြောင်း တင်ပြချက်နှင့်
မုသားသက်သေခံ၏ ပြစ်ဒဏ်အောက်ရှိ သင်၏အသိပေးချက်တွင် ပါဝင်သောအချက်အလက်များသည် မှန်ကန်တိကျကြောင်း၊ သင်သည် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း သင်၏ဖော်ပြချက်
အွန်လိုင်း- HTC မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု အသိပေးခြင်း ပုံစံ။
အီးမေးလ်- copyright_americas@htc.com၊ သို့မဟုတ်
မေးလ်- HTC မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်
ပေးပို့ရန် အလျင်မြန်ဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးခြင်း ပုံစံ မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဖယ်ရှားထားသော အချက်အလက်များကို ပြန်ခေါ်ရန် အတည်ပြုအသိပေးချက်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်း
သင့်အချက်အလက်များကို မှားယွင်းစွာဖယ်ရှားထားသည် သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာဖော်ပြထားသည်ဟု ယူဆပါက ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဘက်ရှိ သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် စာရေးသား၍ HTC မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်သို့ အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ HTC သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို သင်၏အချက်အလက်များသည် မှားယွင်းစွာဖယ်ရှားခံရခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာဖော်ပြခံရခြင်းတို့အတွက် တင်ပြရာတွင်အသုံးပြုရန်သာဖြစ်သည်။ အခြားသောစုံစမ်းမေးမြန်းမှု (ဥပမာ-နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီတောင်းခံမှု) များကို ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှနေ၍ ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
အတည်ပြုအသိပေးချက်ကို ပေးပို့ခြင်းသည် သင်နှင့်တိုင်ကြားသူ အကြားတွင် ဥပဒေလုပ်ထုံးများအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အစဖြစ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ နားလည်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ သင်သည် ထိုအတည်ပြုအသိပေးချက်တွင် တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် စွပ်စွဲခြင်းဖြစ်နေပါက သင့်နိုင်ငံအတွက် တရားရေးဆိုင်ရာ မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် အချက်အလက်များသည် တစ်ပါးသူ၏ မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းရှိ၊ မရှိ မသေချာပါက ရှေ့နေတစ်ယောက်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
HTC မှနေ၍ အတည်ပြုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု အသိပေးချက် အပြည့်အစုံကို မူလပေးပို့သူထံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ပါမည်။ အတည်ပြုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု အသိပေးချက်ကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကြည်ဖြူစွာဖော်ပြပြီးသား ဖြစ်သွားပါမည်။
သေချာစစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ အတည်ပြုအသိပေးချက် ပေးပို့တော့မည်ဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအချက်အလက်များကို HTC မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်သို့ ပေးပို့ပါရန်-
သင်၏ အီလက်ထရွန်းနစ်လက်မှတ် သို့မဟုတ် လက်မှတ်အစစ်၊
ဖယ်ရှားခံထားရသော အချက်အလက်တင်ထားရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိနေရာ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊
သက်သေခံခြင်းပြစ်ဒဏ်အောက်တွင် သင်သည် အချက်အလက်များ မှားယွင်းစွာဖယ်ရှားခံရခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာဖော်ပြခံရခြင်းမှာ မှန်ကန်ကြောင်း ဖော်ပြချက် နှင့်
သင့်လိပ်စာတည်ရှိရာဒေသ၏ တရားရေးဆိုင်ရာများအတွက် ဖယ်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံးမှ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို လက်ခံကြောင်းဖော်ပြချက်၊ သင့်လိပ်စာသည် အမေရိကနိုင်ငံ၏ ပြင်ပတွင်တည်ရှိနေပါက HTC ရှိရာ မည်သည့်တရားရုံးမဆို (ဝါရှင်တန် အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကခရိုင်တရားရုံးအပါအဝင်) တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် သင်သည် မူလမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက်ကိုပေးပို့သူ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို လက်ခံကြောင်းဖော်ပြသည်။
အွန်လိုင်း- HTC အတည်ပြု မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက် ပုံစံ
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်များပေးပို့ရန် အလျင်မြန်ဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးခြင်း ပုံစံ မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍မှတ်သားပါ။
သတိပေးချက် နှင့် အသိပေးချက်
အသိပေးချက် သို့မဟုတ် အတည်ပြု မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက်ကို ဖြည့်စွက်ရာတွင် သင့်အနေဖြင့် အထက်ပါ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံစေရန်ဂရုပြုပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်ထံမှ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ သို့မဟုတ် အသိပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အခြားလိုအပ်သော အချက်အလက်များကို တောင်းခံပါက ကျေးဇူးပြု၍ အမြန်ဆုံးပေးပို့စေလိုပါသည်။ ဤလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိပါက သင်၏အတည်ပြုအသိပေးချက် အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် သင်ပေးပို့သောအချက်အလက်များသည် တိကျမှန်ကန်အောင်စစ်ဆေးပါ။
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက် သိုမဟုတ် အတည်ပြုအသိပေးချက်သည် မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ 17 U.S.C အပိုဒ် ၅၁၂(စ) အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ အပိုဒ် ၅၁၂(စ)။ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်နေခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာအဖယ်ရှားခံရခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာဖော်ပြခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာတင်ပြပါက တင်ပြသူ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။
မူပိုင်ခွင့်အသိပေးချက် သို့မဟုတ် အခြားဉာဏပိုင်ဆိုင်မှု တိုင်ကြားချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တတိယအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူတင်ထားသော အချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲမှုကိုတားမြစ်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် အားထုတ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသော မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု အသိပေးချက်တိုင်း၏မိတ္တူကို လူထုအကျိုးပြု ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် တင်လေ့ရှိသော လူမှုဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း Chilling Effects အပါအဝင် တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
HTC မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်မှ အတည်ပြုအသိပေးချက်တစ်စောင်လက်ခံရရှိသည်နှင့် လက်ခံရရှိပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ရုံးဖွင့်ရက် ၁၀ ရက်အတွင်း ဖယ်ရှားခံထားရသော အချက်အလက်ကို ပြန်တင်ပေးမည် သို့မဟုတ် မသုံးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားမှုကို ရပ်ဆိုင်းပေးမည်ဆိုသည့် အကြောင်းကြားသည့် အတည်ပြုအသိပေးချက်မိတ္တူတစ်စောင်ကို ပြန်ပို့ပေးပါမည်။ ၁၀ ရက်အတွင်း ဖယ်ရှားထားသောအချက်အလက်များကို ပြန်လည်တင်ပေးခြင်း၊ ပြန်လည်တင်ထားသောအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း မရှိခဲ့ပါက မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်မှ အချက်အလက်တင်ပြသူ (အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုသူဖြစ်စေ) ကို အရေးယူနိုင်ပါသည်။
HTC အနေဖြင့် တရားရေးဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက် သို့မဟုတ် အတည်ပြုအသိပေးချက်၏ တရားရေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို သိလိုပါက ရှေ့နေတစ်ဦးဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိပုံစံအပြင် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက် သို့မဟုတ် အတည်ပြုအသိပေးချက် သို့မဟုတ် ဉာဏပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သိလိုသည်များကို HTC မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဖုန်း- (425) 679-5318
ဖက်စ်- (425) 861-1715
HTC မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု အသိပေးခြင်း ပုံစံ
ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ URL
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအမည်
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ၏ မူလသီချင်း
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ၏ အနုပညာလက်ရာ
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ၏ တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ၏ ဗွီဒီယို
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ၏ မူပိုင်ခွင့်ရှိပြီးသား အမှတ်တံဆိပ်
ပြည်နယ် / တိုင်း
ZIP / စာပို့ကုဒ်အမှတ်
ကျွန်ုပ်သည် မူပိုင်ခွင့်ရပြီးသားအလုပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ့အစည်းသည် မူပိုင်ခွင့်ရပြီးသားအလုပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုသည် မူပိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်ထားသူကိုယ်စား ထိုအသိပေးချက်ကို အမှုဖွင့်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အကျိုးဆောင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အချက်အလက်များကို ကွယ်ဝှက်ထားသည့်အခါ ထိုအချက်အလက်သည် သင်၏တောင်းဆိုချက်ဖြင့် ဖယ်ရှားလိုက်သည်ဟု ဖော်ပြထားသော စာမျက်နှာဖြင့်အစားထိုးထားမည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြသင့်သောအမည်ကိုရွေးပါ-
တိုင်ကြားခံထားရသော အချက်အလက်သည် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင် လွှဲအပ်ပေးထားခြင်း လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။
သက်သေခံခြင်းပြစ်ဒဏ်အောက်တွင် ကျွန်ုပ်သည် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား ချိုးဖောက်မှုကိုဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်သည်။
Digital Millennium မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ၏ အပိုဒ် ၅၁၂(စ) အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအောက်ရှိ အချက်အလက် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်သည်ဟု သိလျက်နှင့် မှားယွင်းစွာဖော်ပြသည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်လက်ခံပါသည်။
HTC အနေဖြင့် ဤပုံစံထဲတွင် ထည့်သွင်းပေးပို့သော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ပေးပို့နိုင်သည်။
ဤအချက်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသည် ရလဒ်အနေဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲရှိ ကျွန်ုပ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းခံရစေနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။
ဤအကွက်ထဲတွင် သင့်အမည်အပြည့်အစုံရိုက်ထည့်ခြင်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်အဖြစ် ယူဆပါမည်။
HTC အတည်ပြုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု အသိပေးချက် ပုံစံ
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုသတိပေးချက်ကြောင့် ဖယ်ရှားပြီး ချိုးဖောက်မှုစွဲဆိုခံအချက်အလက်များရှိရာ URL-
ကျေးဇူးပြု၍ အဘယ်ကြောင့် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက်သည် မှားယွင်းသည်ဟုယူဆကြောင်း ထင်မြင်ချက်ပေးပါ။ သတိပေးချက်- ထင်မြင်ချက်များမရနိုင်သည့်အခါတွင် ထိုအရာသည် သင့်အတည်ပြုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု အသိပေးချက်ကို ဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အကူပေးပါမည်။
သက်သေခံပြစ်ဒဏ်၏အောက်တွင် ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များသည် မှားယွင်းစွာဖယ်ရှားခံရခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်လိပ်စာတည်ရှိရာဒေသ၏ တရားရေးဆိုင်ရာများအတွက် ဖယ်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံး မှတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို လက်ခံကြောင်းဖော်ပြချက်၊ သင့်လိပ်စာသည် အမေရိကနိုင်ငံ၏ ပြင်ပတွင်တည်ရှိနေပါက HTC ရှိရာ မည်သည့်တရားရုံးမဆို (ဝါရှင်တန် အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကခရိုင်တရားရုံးအပါအဝင်) တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည် မူလမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက်ကိုပေးပို့သူ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို လက်ခံသည်။
Digital Millennium မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ အပိုဒ် ၅၁၂(စ)(၂)-(၃) နှင့် အခြားဆိုင်ရာဥပဒေများအရ သင့်ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များကို မူလတိုင်ကြားသူထံ ပေးပို့ရပါလိမ့်မည်။
လုပ်ဆောင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြုတ်ချခြင်းနှင့် တောင်းဆိုမှုပြန်လုပ်ခြင်း
HTC မှ အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးရန် အမြန်နိုင်ဆုံး မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက် လက်ခံရရှိပြီးသည့်အခါ
အချက်အလက်များကွယ်ဝှက်ခံထားရသည်ကို ချက်ချင်းအသိပေးရမည်။ ဥပမာ-
“သင်လက်ခံရရှိသော ဤမက်ဆေ့ခ်ျမှာ အောက်ပါအချက်အလက်များသည် HTC မှလက်ခံရရှိထားသော မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက်အရ ကွယ်ဝှက်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးရန်ဖြစ်ပါသည်-”
ထိုအချက်အလက်များသည် မှားယွင်းစွာကွယ်ဝှက်ခံရမှု သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာဖော်ပြခံရမှုကို ယုံကြည်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအသိပေးချက်ကို ဤနေရာတွင်
ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း လိုက်နာခြင်းဖြင့် ပေးပို့နိုင်သည်။
အချက်အလက်များကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဖြုတ်ချပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ ရက် ၃၀ ထက်မနည်း ထိန်းသိမ်းပေးထားရမည်။
အသုံးပြုသူမှ အတည်ပြုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု အသိပေးချက်တစ်စောင် ပေးပို့ပါက-
အတည်ပြုအသိပေးချက်နှင့်အတူ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု အသိပေးချက်ပေးပို့သူကို ချက်ချင်းပံ့ပိုးပေးပြီး
အချက်အလက်များကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတည်ပြုအသိပေးချက် လက်ခံရရှိပြီး ၁၀ ရက်ထက်မနည်း ၁၄ ရက်ထက်မပိုသောကာလတွင် ပြန်လည်တင်ထားပေးရပါမည်။